महाभारतका रहस्यमा लुकेका कथा - सुन्दरीसँग बुबाको विवाह गराउन यस्तो ‘त्याग’ - ज्ञानविज्ञान
महाभारतका रहस्यमा लुकेका कथा :
Don't Miss it एकचाेटि पढाै भान्टाकाे औषधीय गुण ! धेरै राेग निवारणका सहायक उपाय भान्टा
Up Next फेसियल गर्दै हुनुन्छ ? सही ढंगले नगर्दा बिग्रेला अनुहार जान्नुहोस् कस्तो तरिकाले गर्ने फेसियल
यस्ता केहि घरेलु उपचार जसको प्रयोगले आखाको तेज बढ्दै जान्छ
शरीरको सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग भनेको आखा हो । यो सबै भन्दा सम्बेदनशिल आङ्ग हो । तर पनि धेरै मानिसको आखा कम्जोर हुन्छ ।…